Mashruuc Biyo galin ah oo kasocda Burtinle (dhegayso) – Radio Daljir
Mashruuc Biyo galin ah oo kasocda Burtinle (dhegayso)
Maarso 1, 2018 3:54 g 1
Degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa ka socda Mashruuc lagu biyo galinayo dhamaan Xaafadaha Magaalada Burtinle ay ka koobantahay.
Mashruucan oo labilaabay mudo 2 bilood ka hor ayaa wajigiisii hore meel wanaagsan maraya, waxaana ka faaiidaystay oo shaqo Abuur ka helay biyo galintan Magaalada ka socta dhalinyaro farabadan oo nolol maalmeedkooda ku dabara.
Dadka ku dhaqan degmada Burtinle ayaa markii hore waxa ay kacabi jiree baraago ay biyaha ku shubaan booyadaha ka soo dhaamiya ceelasha ku yaala duleedka magaalada, taas oo ay dadku dhibaato ku qabeen ,waxaana muuqatay in baahidii biyaha ee degmada ay qabtay ay meesha ka baxayso.
Muxiidiin Maxamed Xaashi oo kamid aha hool wadeenada Mashruucan ayaa daljir ugawaramay sida ay biyo galinta uga socoto degmada.
Wariye Xasan Heykal ayuu uwaramay
Warbixin kusaabsan dhibaatooyinka Maseeyrka (dhegayso)
mukhtar 2 years ago
wad mahadsantihin waxan ahy nin shaqada khibrad ule waxan idinka raba inad shaqo isisan hadad heshan